အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန - SPS-EP
SPS EP အကြောင်း
Enquiry Point Form
Animal Health & Zoonoses
SPS နှင့်ပတ်သက်၍ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ
ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် Recommendation For Food Manufacturing အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊
ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် Import Recommendation (IR) သွင်းကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်၊
Import Health Certificate(IHC)၊ သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်၊
ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့်အစားအသောက်အတွက် Export Recommendation (ER)၊ ပိုကုန်လိုင်စင်ထောက်ခံချက်၊
Export Health Certificate (EHC) ပိုကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်များ ထုတ်ပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
www.fdamyanmar.gov.mm နှင့် www.myanmartradeportal.gov.mm တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်ပါသည်။
SPS နှင့်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်သော website များမှာ
www.fdamyanmar.gov.mm နှင့် www.myanmartradeportal.gov.mm တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း
လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းမှ တင်ပြစာရွက်စာတမ်းများ အထောက်အထားများအား ပဏာမစိစစ်ခြင်း
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မှ ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့်ညီ/မညီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ပေးပို့နမူနာများအား ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ကော်မတီမှ ပြင်ဆင်ရန်ညွန်ကြားချက်များရှိပါက လုပ်ငန်းမှ ပြင်ဆင်ပြီးကြောင်း ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းအား စိစစ်ခြင်း
တင်ပြသည့်အစားအသောက်နမူနာများ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရာတွင် ဓာတုနှင့်အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်များ ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်စိစစ်ချက်မှာ သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမှုရှိခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီးစီးမှုတင်ပြချက်များစိစစ်ခြင်း
ဗဟိုအစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးကော်မတီမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီး လုပ်ငန်းများအား အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း (ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ် (Good Manufacturing Practice) နှင့်အညီ စိစစ်သောလုပ်ငန်းများအား ထောက်ခံချက်သက်တမ်း ၂ နှစ်ပေးပါသည်။)
(ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းမှုကျင့်စဉ် (Good Hygiene Practice) နှင့်အညီ စိစစ်သောလုပ်ငန်းများအား ထောက်ခံချက်သက်တမ်း ၂ နှစ်ပေးပါသည်။)
ကြာမြင့်ချိန် (၂ လမှ ၈ လ အထိ)
မှတ်ချက်။ ကြာမြင့်ချိန်သည် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ workload အနည်းအများအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနိုင်မှုအခြေအနေပေါ်တွင်သာမက GMP နှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ချက်များအားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းမှ မည်မျှအချိန်ယူဆောင်ရွက်သည်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သော အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း(သက်တမ်းတိုး)
လျှောက်ထားသည့်လုပ်ငန်းမှတင်ပြစာရွက်စာတမ်းများအား အထောက်အထားများအား ပဏာမစိစစ်ခြင်း
သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေး ကော်မတီသို့ လုပ်ငန်းအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန် အကြောင်းကြားခြင်း
သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မှ ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့်ညီ/မညီ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်မှတ်တမ်းနှင့်အတူ ပေးပို့နမူနာများအားဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်း
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ်ကော်မတီမှ ပြင်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက်များရှိပါက လုပ်ငန်းမှ ပြင်ဆင်ပြီးစီးကြောင်း ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းအားစိစစ်ခြင်း
တင်ပြသည့်အစားအသောက်နမူနာများဓာတုနှင့်အဏုဇီဝသတ်မှတ်ချက်များကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ပြီးစီးမှုတင်ပြချက်များ စိစစ်ခြင်း
(ကောင်းမွန်သောထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ် (Good Manufacturing Practice) နှင့်အညီ စိစစ်သောလုပ်ငန်းများအားထောက်ခံချက်သက်တမ်း (၂)နှစ်ပေးပါသည်။
(ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းမှုကျင့်စဉ် (Good Hygiene Practice) နှင့်အညီ စိစစ်သောလုပ်ငန်းများအားထောက်ခံချက်သက်တမ်း (၁)နှစ်ပေးပါသည်။
ကြာမြင့်ချိန် (၂ လမှ ၈ လအထိ)
မှတ်ချက်။ ကြာမြင့်ချိန်သည် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၏ workload အနည်းအများအပေါ်တွင် မူတည်၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးနိုင်မှုအခြေအနေပေါ်တွင်သာမက GMP နှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်ချက်များအားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းမှ မည်မျှအချိန်ယူဆောင်ရွက်သည်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ပြည်ပမှတင်သွင်းလာသော စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစိစစ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနသည် အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ နိုင်ငံတော်အတွင်း ထုတ်လုပ်၊ တင်သွင်း/တင်ပို့၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိသော စားသောက်ကုန်များ အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု တစ်ခုဖြစ်သည့် သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသည့်စနစ်သည် အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်အခြေပြုဆန်းစစ်စီမံခန့်ခွဲမှု့ကို အခြေခံသော ကုန်သွယ်မှုလျင်မြန်လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးကို အထောက်အကူပြုသော စနစ်တရပ်ဖြစ်ရန်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။
နိုင်ငံတကာနှင့်​ဒေသအတွင်း ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသော သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အသိမှတ်ပြုခြင်းစနစ်တို့နှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်သာမက အစားအသောက်ဘေးကင်းရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီရေးအတွက် ပိုမိုကြံ့ခိုင်သော စိစစ်မှုစနစ်ပေါ်ထွန်းလာရေးရည်ရွယ်ပြီး သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အသစ်များကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည် ပိုမိုကြံ့ခိုင်သော သွင်းကုန်/ပို့ကုန် ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုစနစ်အတွက် ပထမအဆင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်အခြေပြု ဆန်းစစ်မှုကို အခြေခံသောစိစစ်ခြင်း
(၂) ကုန်သွယ်မှုလျင်မြန်ချောမွေ့စေရေးအထောက်အကူပြုစေရန် အခြေခံ၍ စိစစ်ခြင်း
(၃) နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နေသော သွင်းကုန်/ပို့ကုန်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းစနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေစိစစ်ခြင်း
(၄) စားသောက်ကုန်တင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းများ၏ တာဝ​န်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုကို ပျိုးထောင်အားပေးသည့်စနစ်ကို အခြေခံ၍စိစစ်ခြင်း
(၅) စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများ၏ အစားအသောက်ဥပဒေ၊ စည်းကမ်းများအပေါ်လိုက်နာမှုနှင့် တင်သွင်းစားသောက်ကုန်၏ အစားအသောက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနိုင်ခဲ့မှုအပေါ်အခြေခံစိစစ်ခြင်း
(၆) အချက်အလက်အခြေပြုစိစစ်ခြင်း (Data based assessment)
(၁) တင်သွင်းလိုသည့် စားသောက်ကုန်ကို နမူနာရယူခြင်းနှင့် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု မပြုလုပ်ခြင်း။
(၂) ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးတည်း၏ ကုန်ကစ္စည်းတူ၊ အမှတ်တံဆိပ်တူ၊ စားသောက်ကုန်ကို ထုတ်ပိုးပုံ(pack size) ကွဲပြားမှုများအတွက် ခွဲခြားသတ်မှတ်စိစစ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ တစ်ခုတည်းအဖြစ်သာဖြေလျော့ပေးခြင်း။
သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် / ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်
(၄) စိစစ်ခနှင့် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခ ၂ မျိုးကို စားသောက်ကုန်အားလုံးအတွက် ပုံသေနှုန်းထားဖြင့်ကောက်ခံခြင်း။
(၅) ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်းကိုကြိုတင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်စိစစ်ထုတ်ပေးခြင်းဟု နည်းလမ်း ၂ မျိုးဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
စားသောက်ကုန်အတွက် သွင်းကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
စားသောက်ကုန်အတွက် ပို့ကုန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
စားသောက်ကုန်အတွက် ပို့ကုန်ထောက်ခံချက် လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်၏ ကင်းလွတ်ဇုံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းများအတွက်သီးခြား ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
Phone – ၀၉၉၅၀၆၂၉၇၉
Email – chawnunuaye@gmail.com
The SPS National Enquiry Point has been established at Department of Agriculture – Plant Protection Division of the Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation.
World Trade Organization – SPS Agreement
List of WTO Members National SPS Enquiry Points (WTO)
© 2019 SPS-EP. All Rights Reserved.